Oduu Simbirtuu: Ajajaan humna Waraanaa Eertiraa, jeneraal Filiippos WoldeYohaannis waldhabdee waraana Eertiraa gidduutti dhalateen rasaasaan rukkutamuun dhagahame. – Kichuu
HomeNewsAfricaOduu Simbirtuu: Ajajaan humna Waraanaa Eertiraa, jeneraal Filiippos WoldeYohaannis waldhabdee waraana Eertiraa gidduutti dhalateen rasaasaan rukkutamuun dhagahame.
Oduu Simbirtuu: Ajajaan humna Waraanaa Eertiraa, jeneraal Filiippos WoldeYohaannis waldhabdee waraana Eertiraa gidduutti dhalateen rasaasaan rukkutamuun dhagahame.
Oduu Simbirtuu!Ajajaan humna Waraanaa Eertiraa, jeneraal Filiippos WoldeYohaannis waldhabdee waraana Eertiraa gidduutti dhalateen rasaasaan rukkutamuun dhagahame.
Yeroo ammaa kana waraana Eertiraa keessatti warra baddaa(Tigiraay waliin firummaa qabaniifi Warra gammoojjii hordoftoota amantaa musliimaa kan baay’atan ,Hamaasen aangoo siyaasaa kan harkaa qaban gidduutti waldhabinsi guddaan jiraachuun mirkanaa’eera.
ODUU Hatattama warani isayasa irrati fonqolcha godhu fi pp fi tplf lola iti fufu | Moha Oromo
Live: Virtual hearing in the Africa, Global Health, Global Human Rights, and International Organizations Subcommittee